Tilikambo fampitana herinaratra, tilikambon'ny fifandraisana - Qiangli
Manome vokatra avo lenta izahay
Tilikambo vy vy
Tilikambo vy angovo angovo herinaratra dia karazana rafitra vy izay mitazona elanelana azo antoka eo anelanelan'ny mpampita, ny tariby ary ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Avy amin'ny rafitra: tilikambo vy amin'ny zoro ankapobeny, tsatokazo fantsom-by ary tilikambo vy tery fantsona vy. Ny tilikambo vy misy zoro dia matetika ampiasaina any an-tsaha, ary ny tsato-by fantsom-by sy ny tilikambo fantsom-by dia matetika ampiasaina any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe satria kely kokoa noho ny ...
Hijery misimisy kokoa>
Tilikambo vy vy zoro elektrika dia karazana vy vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fitomboana haingana ny toekarem-pirenena, ny indostrian'ny angovo dia nivoatra haingana, izay nampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny tilikambo mpampita. Raha ny statistika dia nitombo ny fidiram-bolan'ny indostrian'ny tilikambo mpampita any Chine tamin'ny 5 bil ...
Tilikambo vy misy zoro herinaratra Ny tsangambato vy dia zoro lovia miaraka amin'ny fidinana ambany. Ny faritra miboiboika dia vita amin'ny vy zoro mifanila amin'ny tsirairay, ary ny lamin'ny fandaminana ny vy zoro dia mifanitsy amin'ny làlan'ny fikorianan'ny rano. Ny sisin'ny maranin'ny vy zoro dia eo amin'ny faritra ambany, ary ny fizarana hazo fijaliana dia miendrika "V". Misy elanelana misy eo anelanelan'ny vy vy roa mifanakaiky aminy. Ilay midina dia mitovy amin'ny lovia mahazatra. Ny ranoka ao ambony pl ...
Tilikambo vy vy zoro elektrika dia karazana vy vy izay afaka mitazona elanelana azo antoka azo antoka eo anelanelan'ny mpampita sy ny tranobe eo amin'ny tsipika fandefasana. Tamin'ny taona 1980, firenena maro eto amin'izao tontolo izao no nanomboka nametraka piraofilina vy tamin'ny rafitry ny tilikambo rehefa namorona tsipika fandefasana UHV. Tilikambo fantsom-by vy misy fantsom-by toy ny fitaovana lehibe niseho. Any Japon, ny tilikambo fantsom-by dia saika ampiasaina amin'ny tsipika sy tilikambo 1000kV UHV. Izy ireo ...
Qingdao Qiangli Steel Structure Co. Ltd, hita tamin'ny taona 1998, dia mirotsaka amina karazana firafitry ny firafitra vy, ny fanamboarana ary ny fametrahana azy, izay manome serivisy fijanonana tokana ho an'ny mpanjifa ho toy ny orinasa manokana lehibe. Izahay dia mahafeno fepetra ho Qingdao High Technology Enterprise ary filoha lefitra Enterprise ao amin'ny Jiaozhou Steel Structure Association.
Ny famindran-toerana efa simba ambanivohitra dia iray amin'ireo tetik'asa fikarohana fonenana vy
Ny fananganana trano vy dia ny fanatanterahana seismika any ambanivohitra, vanim-potoana fohy fananganana, ambaratonga avo amin'ny indostrialy, fitsitsiana angovo, azo averina, sns., Mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny fampandrosoana maitso nasionaly sy ny fananganana fitarihana politikam-piarahamonina mpamonjy loharanon-karena. “Dilapi ambanivohitra ...
Hebei voalohany ny vondrom-piangonana mivondrona vy voalohany dia hanomboka ny fananganana any Shijiazhuang
13 Janoary, “Governemantan'ny Vondrom-paritany Hebei momba ny fampiharana ny fampiroboroboana ireo tranobe miendrika fivoriambe amin'ny fampiharana ny fomba fijerin'ny” famoahana ofisialy, mba hanafainganana haingana ny fampiharana ny fivorian'ny Hebei sy ny fampandrosoana. Zhuo Da Group miaraka ...
Nampandrenesina ireo mpitati-baovao omaly avy amin'ny kaomity fitantanana vavam-bava Jiangbei fa ny Chongqing Steel Industry Co., Ltd. dia nanorim-ponenana tao amin'ny tanàna ara-bola Jiangbei No. 3 T3, manamarika ny faritry ny indostrian'ny vava Jiangbei hanatsara bebe kokoa. Chongqing Steel Structure Industry Co., Ltd. dia niorina ...
Trano fanaovana fanatanjahan-tena kianja lehibe an'ny kianja Olaimpika Bengbu an'ny crane voalohany nahavita ny fanamboarana
Raha ny filazan'ny Bengbu News dia nitatitra fa ny marainan'ny 28 febroary, kianja fanaovana kianja lehibe an'ny Sports Sports Bengbu, 45 metatra, milanja 60 taonina ny tetezana fampiatoana vy dia nampiakatra tsimoramora ny crane tilikambo, ary avy eo napetraka tsy tapaka 20 metatra avo ambonin'ilay tsanganana vy, ...
Gymnasium faritany no nanangana ny vatan'ny kianja sy ny firafitry ny vy
Lanzhou Morning News (Reporter Lu Weishan) Ireo mpitati-baovao tamin'ny 23 febroary natao tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny fanatanjahan-tena ao amin'ny faritany dia nampandrenesina fa tamin'ny taon-dasa dia nanao fandrosoana lehibe ny faritany teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena nasionaly, nihazakazaka 68 ny isam-paritany, nampitombo ny kianja Maimaimpoana ezaka misokatra ...
Tilikambo vy anggoro elektrika, Tilikambon'ny Serasera Kaonty, Tilikambo famindrana angovo vy, Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika, Firafitra Steel Prefab, Rafitra vy amin'ny Tube,